आफ्नै चिहान खनीरहेको पुजीबाद र विप्लब माओबादी::RATONEWS
आफ्नै चिहान खनीरहेको पुजीबाद र विप्लब माओबादी
बिश्वासबिक्रम चन्द (बिज्ञान)
सर्बहारा बर्गको महान गुरु कार्लमाक्सले भन्नूभएको ” पुजिपती जनबिरोधी शासकहरुले आफ्नो चिहान खन्नेहरुलाई जन्माउने गर्छ । आफू बस्ने ठाउमा चिहान खनेर राखेको हुन्छ । आफैले बनाएको खरिद गरेको हतियारले मर्नु पर्छ “! नेपालि कम्युनिस्ट आन्दोलन को सन्धर्भमा पनि यो सहि साबित भयो र थप शृङ्खला थपिदै जानेछ !
जब कि देश र जनता प्रती उत्तरदायी, जिम्मेवारीपूर्वक अहोरात्र अनबरत निरन्तर रुपमा संघर्षशिल चन्द माओबादी माथी दमन गरेर राज्यले आफ्नो कायरता/कमजोरी असक्क्षम / दुस्साहस प्रदर्सन गर्नु ले उपरोक्त कथन सङ्ग पुरै मेल खान्छ । राज्य ले फेरि, चन्द माओबादी लाई चलाएर युद्ध को बीउ रोपेको छ । स्वाभाविकरुपमा जे रोपिन्छ त्यही फल्ने गर्छ । राज्य उत्पीडन को साधन रहुनजेल जनता ले आफ्नो मुक्ती र न्याय को निम्ति प्रतिबाद गर्नु नितान्त स्वाभाविक / न्यायोचित जायज/ सकारात्मक र स्वागत योग्य कुरा हो । चाहे आबश्यकता अनुरुप बन्दुक नै प्रयोग किन नहोस । सुतेको बाघ लाई चलाएपछि नखाएको कहाँ छ र ? माओबादी हतियार र सेना बिहिन छ भन्ने ठानेर होलान, शान्तिप्रकृया मा प्रवेश गरेपश्चात माओबादी लाई राज्यले निकै बेवास्ता र अपहेलित गरेको छ । तर शासकहरुले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने, “जब घरमा बिरालो हुदैन मुसा हरु अगिना वरिपरि उफ्रि उफ्रि नाच्छन जब, बिरालो घर मा पुग्छ तब मुसाहरु कुन दुलोमा पस्छन अत्तोपत्तो हुदैन” अन्ततः प्रतिक्रियावादी शासक हरु को हबिगत पनि त्यही मुसा को भन्दा अर्को हुदैन। ” क्रान्ति पूरा नभई बास्तबिक जन संविधान र शान्ति सम्भब छैन”। निश्चितरूपमा, राजनितिक क्रान्ती सम्पन्न नभई वास्तबिक अर्थमा शान्ती र संविधान सम्भब छैन र हुदैन । किन कि राजनीति सबै नीति को प्रधान नीति हो । यसर्थ :शान्ति र संविधानको बास्तबिक आमा राजनिती भएको हुदा आमालाई सम्मान गर्नु छोराको कर्तव्य र दाईत्त्व हो । गर्भधारण नभई बच्चा को आशा गर्नु मुर्खता हो । बच्चा जन्मिनको निम्ति पहिला गर्भवती हुनुपर्छ । नौ महिना सम्म पटक पटक गर्भ को परिक्षण र (video xray) गर्नु पर्छ ।
आमा र बच्चा को अवस्था राम्रो भए मात्र स्वास्थ बच्चा जन्मिन सक्छ । नेपालको सन्धर्भमा भएको के हो भने गर्भधारण भएकै थिएन ( क्रान्ती पूरा भएकै छैन) तर (doctor) सँग जचाउने (video xray) गर्ने नाटक गरिएको थियो र् छ । जनताको सुझाब सङ्कल गर्ने काम पनि नाटक नै थियो । त्यो नाटक ले बच्चा जन्मिएको छैन । अथवा जन संविधान बन्न सकेको छैन सकेन। र आज शान्ती होइन अशान्ति ब्याप्त छ। त्यसको प्रमाण मधेस आन्दोलन, भारत ले गरेको अघोषित नाकाबन्दी परिणामस्वरूप नेपाली जनताले सामना गर्दै आउनुपरेको कट्कर परिस्थिति लाई लिन सकिन्छ । राजनितीक दल हरु ले जनता लाई ढाटेको कुरा पुष्टि भएको छ। जनमुखी संविधान नबन्नुमा र शान्ति नहुनुमा मुल रुपमा एमाओबादीको बैचारिक बिचलन आत्मसमर्पण र भौतिक बितन्डा जिम्मेवार छ तर काङ्ग्रेस र एमाले पनि त्यतिकै दोषी हुनबाट अछुतो छैनन । क्रान्तिको नाम मा प्रतिक्रान्ती, शान्तिको नाममा अशान्ती, रास्ट्को नाम मा रास्ट्घाट, जनताको नाम मा जनघात, अधिकार को नाममा सामाजिक सदभाब खल्बल्याएर धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरु बाट सचेत हुनै पर्छ । स्वार्थी गिद्दे तथा ब्वासो मनोवृत्ति पालेका मान्छेका अनुहार मात्र भएका पशुहरुबाट वास्तविक अर्थमा जनसंविधान निर्माण सम्भब छैन । र राजत्रन्त्रात्मक ब्याबस्था देखि गणतन्त्र सम्म आईपुग्दा केही परिवर्तन त भए तर 10 kg पोखेर5kg उठाउनु पर्दा कसरी उपलब्धि मा आत्मसन्तुष्टि हुनु? रक्सी को जुन स्तरमा सुदृढीकरण हुनु पर्ने हो त्यो भन्दा बोतल मात्र धेरै फेरियो आमसिकरुपमा परिवर्तन जस्तो देखिएता पनि गुण र व्यबहारमा परिवर्तनको प्रत्याभूति भैसकेको छैन । सबैलाई आफू केन्द्रीत आफ्नो माग पूरा गराउनु छ । अरुको दुखाई कसैलाई महसुस हुदैन । कर्तव्य बोध र जिम्मेवारी बोधको कुनै वास्ता नै छैन । आफू भलो त जगत भलो र आफ्नो हात जगन्नाथ भएको छ । फटाहा लुच्चा लफङ्गा टाठा बाठामा गनिएका छन । ईमानदार सधै सोझो असक्षममा दर्ज भएका छन । कसैले म तपाईं लाई भात खुवाउछु त भन्ला तर त्यो सँग भात का लागि आबश्यक चिजहरु नै छैन भने त्यसले खुवाउन त सक्दैन । त्यसकारण : क्रान्ती गर्ने र संविधान बनाउने कुरा पनि कसैले चाहेर मात्र हुने होइन त्यसका निम्ति आधार हरु हुनुपर्छ भन्ने मा हामिहरु प्रष्ट नै छौ। निश्चितरूपमा बिस्वभरिनै क्रान्तिको निम्ति बस्तुगत आधारहरु त तयार छन । तर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट हरुको आत्मगत पक्ष नितान्त कम्जोर छ । तसर्थ : हामिले अब बस्तुगत आधार तयार भएको कुतर्क गरेर क्रान्तिबाट भाग्ने पन्छिने कुचेस्टा गर्ने होइन कि प्रत्येक ले आफ्नो आत्मगत पक्ष बलियो बनाउन आबश्यक मात्र होइन आजको अपरिहार्य भैसकेको सत्य लाई ईन्कार गर्न, नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन हुदैन । क्रान्ती सम्भब छ । यो २१सौ सताब्दीमा अन्धकारमय विश्व असम्भब छ ।